China - Nhau dzekufamba | Nhau dzekufambisa (Peji 2)
Iwe unofarira El Tibet here? Saka ronga rwendo rwako zvakanaka uye uzive zvese nezve vhiza uye chaiwo mvumo iwe yauchazoda kuenda padenga repasi.
Iyo Great Wall uye iyo Terracotta Mauto, maviri makuru kushanya muChina (II)
Ichi chinyorwa chechipiri nezveGreat Wall neTerracotta Army, kushanya kukuru kuChina (II). Tiri kutaura, panguva ino, nezve mauto.
Iyo Great Wall uye iyo Terracotta Mauto, maviri makuru kushanya kuChina (I)
Ichi ndicho chinyorwa chekutanga chezvese zviviri zvatinozoisa kuMadziro Makuru eChina neTerracotta Army, kushanya kukuru kuChina.
Chinese gastronomy, zvisere zvinonaka zvitaera
Uri kuenda kuChina here? Iwe unoziva here kuti pane zvisere zvechikafu cuisine asi mazana ezvinonhuwira? Ive neshuwa yekuyedza yakasarudzika Chinese chikafu. Iwe uchayamwa zvigunwe zvako!
China: Basa revakadzi, chaiwo madhirezi uye echinyakare mitambo
Dzidza zvishoma nezvekwakabva kwazvino tsika dzeChinese: basa revakadzi, chaiwo madhirezi uye mimwe yemitambo yechinyakare.
Musika weusiku unozivikanwa weBeijing weDonghuamen unovhara
MuSpain nemunzvimbo dzakatipoteredza, kudya zvipembenene zvinoita senge nyonganiso chaiyo kwatiri. Asi chokwadi ndechekuti…
Ndeipi mashiripiti nhamba muChina uye zvinorevei? Tsvaga kuti nei paine nhamba yakasarudzika muChina uye iwe uchazoziva kana iri nhamba yerombo kwauri.
Kuronga yako China rwendo? Tsvaga izvo zvinowanzoitika zveChinese zviyeuchidzo, chipo chinoshamisa kushamisika shamwari dzako nemhuri.
Iyo panda inotakura ine rudo kana ine ngozi kuvanhu? Tsvaga zvese zvakavanzika zvemhuka chaiyo yeAsia iri munjodzi yekutsakatika.
Isu tinowana zvese nezve China: nhoroondo, tsika, jogirafi, zvinokwezva nemakona izvo zvausingakwanise kupotsa parwendo rwako kuenda kuAsia nyika
Matatu Gorges Dhamu, chinoshamisa cheChinese
Iyo matatu Gorges Dam ndechimwe chezvishamiso zvazvino zveChinese engineering. Tsvaga zvakavanzika zvaro, zvarinoshandiswa uye kwaunogona kuzviona
Kuvaka kweLotus, chivakwa chakaumbwa nemaruva muWujin
Iyo inonyanya kutyisa tambo mota munyika, muChina
Kune akawanda macable mota muAsia asi hapana senge iyo yaunowana mutaundi reYushan, muChina: inotyisa mota tambo pasi.
Nanpu Bridge, iro rinoyevedza bhiriji muShanghai
Nzira yakanaka yekuziva kukosha kweguta rakayambuka nerwizi kuyera kukura nekukura kwemabhiriji aro. Panyaya yeShanghai, chingotarisa paNanpu Bridge, iro bhiriji rinoshamisa rinotenderera Rwizi rweHuangpu.
Guta remweya reFengdu
Pamusoro peMing Hill, kumucheto kwekumusoro kwerwizi rweYangtze muChina, ndiFengdu, iro "ghost town." Iyi inzvimbo isinganzwisisike inokwezva vashanyi kubva pasirese, asi kunyanya vagari vanobva kune mamwe matunhu epasi. Uye ndeyekuti ino nzvimbo inzvimbo yakakwana yekudzidza zvese nezve chiChinese tsika yezvipoko uye nehupenyu hwerufu.
ChiCantonese Cuisine Dishes
Pane ino nguva isu ticha taura nezve chikafu cheCantonese, gastronomy inotangira mudunhu reCanton, kumaodzanyemba kwe ...
Huangluo, China: vakadzi vane vhudzi refu kwazvo pasirese
Pasi rese, vakadzi vane hanya nekuve nevhudzi rakanaka, asi kuna Yao Huangluo vakadzi muChina, zviri nezve chimwe chinhu. Bvudzi ndicho chinhu chavo chakakosha, pfuma yavanotarisira muhupenyu hwavo hwese, vachichirega chichikura kusvika zuva ravanofa.
Laolongtou: panosangana neGreat Wall
Takataura pano kakawanda pamusoro peGreat Wall yeChina: kuwedzera kwayo, mamiriro ayo ekuchengetedza, sei uye kupi kwekushanyira ... Zvisinei, hatina kumbobvira tataura nzvimbo kwainopera. Kuti tizive, tinofanirwa kuenda kuShanghaiguan, mudunhu reQinhuangdao, anenge makiromita mazana matatu kumabvazuva kweguta reBeijing.
Chii chekuona nekuita muGuangzhou
Guangzhou (Canton) ndiro guta rechitatu pakukura muChina uye mumakore achangopfuura iri kubata Beijing neShanghai muhuwandu hwevashanyi. Maawa maviri chete kubva kuHong Kong neMacau, ndiyo nzvimbo inowedzera kutsvakwa uye kukosheswa nevashanyi vanoenda kuAsia. Hechino chimbichimbi gwara
Wepamusoro mashanu echiChinese pagodas
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anozivikanwa ekuvaka ekumabvazuva munyika ndeye pagoda. Parizvino muAsia yese, kwayakatangira inodzokera kumashure ...
Zvivakwa zvitatu zvakakwirira kwazvo muHong Kong
Hong Kong nderimwe remaguta anonyanya kufadza pasi rese. Ndinochida nekuti hachisi chekungoita skyscrapers ...
Kutenga muChina: Iwo Masoko eShanghai (Chikamu 2)
Tinoenderera mberi nekuziva mimwe misika yeShanghai uye nekuwana iyo Shanghai Longhua. Iwo musika kwaunogona kuwana mbatya ...
Kutenga muChina: Iwo Masoko eShanghai (Chikamu 1)
Ndiani asingade kuenda kunotenga? Mhinduro yacho pasina mubvunzo munhu wese. Ino nguva ...
Inonakidza uye inofarira kuziva nezve China
China inzvimbo yakanaka yekushanyira uye pamwe nezvinhu zvese zvaunofanirwa kuita, chichava ...
Iyo isinganzwisisike White Cloud Tembere
Iyo White Cloud Tembere muChina iri kumucheto kweXibianmen, muBeijing. Ndechimwe…
Ungasvika sei kuGuilin? Ndege, zvitima nemabhazi
Guilin iguta riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweGuangxi Zhuang Autonomous Region, muChina. Kusvika ku…